Steeti Searchchọ Azụmaahịa na 2015 | Martech Zone
N’oge na-adịbeghị anya, agwara m otu ndị a kpọrọ m ugboro ugboro ka m gwa ha okwu n’ime afọ ise gara aga. N'otu oge na mkparịta ụka ahụ isiokwu gbanwere gaa ojiji isiokwu. Jaws dara ka m gwara ndị na-ege ntị ka ha kwụsị ichegbu onwe ha banyere oke okwu na ojiji na ọdịnaya ha niile. Ọ bụ ezie na m ka na-eche isiokwu dị oke mma iji rụọ ọrụ n'ime aha nke post, maka ọtụtụ akụkụ m kwenyere na ị ga-aka elekwasị anya n'ịde akwụkwọ nke ọma karịa ịnwa ide maka engines ọchụchọ.
Nke ahụ abụghị eziokwu afọ ole na ole gara aga, anyị mkpa ịbụ ihe mmemme ka igwe nyocha wee ghọta ihe gbara ọdịnaya anyị. Mana ọ bụ nkwenye m ugbu a na ọganihu Google na-atụle ọtụtụ mgbanwe dị iche iche - gụnyere akụkọ ihe mere eme nke saịtị ahụ, ikike onye edemede ahụ, amaokwu ndị dị ka aha aha, aha ngwaahịa na ọdịdị ala - iji chọpụta mkpa, ikike yana n'ikpeazụ ogo nke ibe.
Mgbe ndị na-amalite azụmaahịa ọhụrụ ebe ha ga-elekwasị anya n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, ahịa ọchụchọ na-adịkarị nso n'elu nkwanye. O doro anya na ọ dabere n'ogo nke ebumnuche nke ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ọchịchọ maka ọrụ ọhụrụ ahụ, yabụ mmadụ ole na-achọ ngwaahịa na ọrụ. Ihe dị mkpa ịzụ ahịa ọchụchọ taa gosipụtara site na infographic ọhụụ anyị mepụtara JBH Ahịa. Ọ na-egosi mkpa nchọta ịbịaru na data kachasị ọhụrụ sitere na SimilarWeb na ọkwa nke ndị na-azụ ahịa site na nyocha yana gụnyere ndụmọdụ na nyocha bara uru site na ụfọdụ n'elu ebe iji mụta banyere ọchụchọ dị Moz, Ala Nchọnchọ na Nchọgharị ọchụchọ. Dave Chaffey
Ihe omuma ihe omuma a na-emebi ala nke ahia ahia nke oma, gunyere ha abuo akwụ ụgwọ ọchụchọ (ịkwụ ụgwọ kwa Pịa) na nyocha ọchụchọ (eke ogo). Enginere ire ere ihe ka bu uzo kachasi na ntanetị ma ekwesighi ileghara ya anya. Mgbe anyị abụghị nnukwu Fans nke SEO ụlọ ọrụ na usoro aghụghọ nke ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-ebugharị na-etinye ndị ahịa ha n'ihe egwu nke ịbụ ndị edepụtara, ọ ka bụ ihe enyemaka dị egwu maka ndị ahịa anyị ịmata ihe atụmanya ha na-achọ na otu ha si azaghachi ọdịnaya edere ma kesaa ndị ahịa anyị. 'saịtị na nke anyị.
Tags: 2015Dave Chaffeyjbhọchụchọ ahịa infographicezi ucheamamịgheala nke ahia ahia